Canadian University of Dubai - Fianarana any Emirà Arabo Mitambatra
fanafohezan-teny : mandinika
Aza adino ny discuss Canadian University of Dubai
Canadian University Dubai, naorina in 2006, no misy ao am-Dubai. Tsirairay ny fianarana fandaharana Mifototra amin'ny Kanadiana fandaharam- pianarana sy fanabeazana fitsipika. Izany dia manome fahafahana ny mpianatra Kanadiana fanabeazana raha manaja ny kolontsaina sy ny soatoavina ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra. maherin'ny 100 hafa firenena izay miantso ny University an-trano, ny mpianatra dia manorina tetezana manerana kolontsaina sy kaontinanta.
Ny tanjontsika dia hifindra ny mpianatra tsirairay hatrany Toy ny loharano-boribory mpianatra mandritra ny fiainana sy ny tsara maneran-olom-pirenena. Mba hanatrarana izany, fanamafisana no tsy apetraka fotsiny amin'ny zava-bitany akademika, fa koa ankoatra ny anjara. Ny mpianatra mavitrika ny fiainana dia manome zavatra ho an'ny olon-drehetra, avy amin'ny fanatanjahan-tena ny rindran-kira, ary isan-karazany iraisam-pirenena nivezivezy in eo. Mpianatra ihany koa ny mandray anjara amin'ny maro isan-karazany ny hetsika ara-tsosialy, anisan'izany ny fiaraha-monina fanangonam-bola, ekipa trano, ary tambajotra zava-nitranga.
10 antony hisafidy Canadian University Dubai
Misy antony maro hisafidy Canadian University Dubai noho ny undergraduate na fianarana, fa aoka isika hilaza aminao ny zavatra mampiavaka antsika afa-tsy ny mpiara-mianatra:
1. Kanadiana-monina fandaharam-pampianarana
Isika hanatitra fanabeazana miorina amin'ny Canadian fandaharam-pianarana, manome antsika ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fitokisana fantatra kalitao.
2. Safidy ny diplaoma any Kanada
Toy ny vavahadin-tserasera ny Kanadiana fampianarana ambony, dia afaka manomboka ny mari-pahaizana amin'ny mandinika dia hamita ny fampianarana sy ny diplaoma avy amin'ny iray amin'ireo mpiara-miasa andrim-panjakana any Kanada.
3. UAE fankatoavana
Rehetra ny fandaharana no deraina noho ny UAE Ministeran'ny Fanabeazana: Higher Education Affairs.
4. sampam-pianarana iraisam-pirenena
Ny sampam-pianarana iraisam-pirenena no tena mahafeno fepetra sy manentana fanahy eo amin'ny saha, mitondra vaovao fomba fampianarana sy ny filozofia avy manerana izao tontolo izao.
5. nahazo diplaoma tsenan'ny asa
Amin'ny fampianarana miorina amin'ny foto-kevitra ny voasoratra Kanadiana fianarana vokatra, Mandinika nahazo diplaoma dia tena employable ao amin'ny tsena iraisam-pirenena asa.
6. malefaka fianarana
Manolotra fandaharana izahay malefaka fandaharam-potoana - hariva sy ny faran'ny herinandro dia misy fampianarana ho an'ny undergraduate sy ny diplaoma fandaharana.
7. Business-distrika toerana
Manana mety afovoan-tanànan'i toerana ao am-Dubai ny raharaha distrika, amin'ny toetry ny ny zavakanto-pianarana sy ireo toerana fialana voly.
8. Mpianatra mifantoka fomba fiasa
Mandinika dia mpianatra mifantoka oniversite, izay manome lanja ny mpianatra fahombiazana mihoatra noho izay rehetra hafa.
9. Research fahafahana
Ny Research Centre manome mpianatra ny fahafahana mandray anjara amin'ny fanapahana sisin'ny fikarohana sehatra iraisam-pirenena sy ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra.
10. Kolontsaina maro mpianatra fiaraha-monina
Manana ny tena kolontsaina maro fianarana tontolo iainana, miaraka amin'ny mpianatra avy ny 100 zom-pirenena.
Sekolin'ny Engineering, Applied Science and Technology
The School of Communication and Media Studies offers studies in three different fields, Fanaovan-gazety, Public relations and Advertising, for now however, three degrees, two of which are the same in content but are either achieved in English or Arabic. The Bachelor of Arts in Communication degree is available in the English or Arabic languages and will possibly be increased in the near future. The third degree is a Bachelor of Arts in English Language and Translation.
Graduate School ny Fianarana
Ianao ve mila discuss Canadian University of Dubai ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Canadian University of Dubai ofisialy Facebook